Karinta Khamriga: Waxyaabaha bedelka ah
Saliida ugu weyn
Caano iyo Suugo
Makhaayadaha & Cuntada fudud
Noocyada Cabbitaanka iyo Talooyinka
Deeqda hilibka doofaarka
Cabitaanka & Kookaha Noocyada Cabbitaanka iyo Talooyinka Khamriga Khamriga Khamri Nadaafada Cabbitaanka Cabbitaanka
Waxa la sameeyo marka la karinayo qaylo dhaan gaar ah oo khamriga ah ma dhicin inaad samayso maaddadaas gaarka ah? Cabbitaanka khamrigu wuxuu noqon karaa mid caqli gal ah, oo qof walbana ma rabo inuu yahay maaddo; Haddii aad u adeegeysid saxarada caruurta ama qof aan cabin khamriga, ma aha had iyo jeer haboon. Tilmaamahan wuxuu kaa caawinayaa inaad beddesho maadooyinka khamriga ee kala duwan oo aan khamri ahayn.
Ku dhowaad dhammaan wakhti aad ka heli karto hab kale oo wanaagsan oo wanaagsan si aad ugu adeegto bedelka khamriga. Kaliya ogsoonow bedelaadda nooca bedelida alkahoosha.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka ku saabsan waxa aad u isticmaali karto cuntooyinkaaga marka aad ka baxsan tahay qaboojiyaha ama aadan rabin inaad ku darto. Natiijooyinkaaga ugu dambeyntii way ka duwanaan doonaan qariidada asalka ah, laakiin taasi maahan wax xun.
Tani waa mid sahlan. Halkii laga heli lahaa liin macaan oo macaan , aad si fudud u isticmaali karaa miraha almond.
Beer ama Ale
Goobaha iftiinka ah, maraq digaag ah, marinka ginger ama casiir cad canabka ah. Goobaha culus, isticmaal hilibka hilibka lo'da, digaaga ama maraq ama mugdi. Qashin aan khamriga ahayn ayaa sidoo kale laga beddeli karaa.
Khamradani waxaa laga sameeyaa khamri saafi ah ama casiir khudrad ah, sidaa darteed waxaad beddeli kartaa casiir tufaaxa ama dhadhan kale oo casiir khudrad ah iyada oo ku xiran qadarka. Waxa kale oo aad rabtaa inaad isticmaasho huurid la kariyey (vanilj, liin, iwm) haddii qandhadu ay ku baaqdo qadar yar.
Tani waa nooc ka mid ah tufaaxa tufaaxa, sidaas darteed waxaad isticmaali kartaa kaliya cabitaan tufaaxa casiir ah ama casiir.
Maaddaama this liishur mucjis ah raspberry madow , waxaad beddeli kartaa casiir raspberry, sharoobada ama soo saaridda natiijooyinka la mid ah.
Champagne ama Sparkling Wine
Cabbitaanka juuska cad ama ciriiriga dabiiciga ah waa mid aan fiicnayn.
Claret ama Bordeaux
Khamriga aan khamriga ahayn, currant la badhaxay ama casiir sabiib ah, sharoobada khudradda cherry ayaa shaqeyn doonta ganaax.
Tani waa da ', khamriga laba-dabacsan (ama casiir khudradda miraha leh) waxaa lagu badali karaa shimbiraha, khudradda ama casiirka.
Waxaad bedeli kartaa juice orange juice orange juice or juice caadiga ah liin Faransiis this, liin macaan liinta. Haddii aad isticmaasho cabitaanka liin, horey u yaree (karkarin) si aad u siisid isku dhafnaan ka hor inta aadan ku darin qajilkaaga.
Liqueur oo ka samaysan daroogo Seville ah waa qayb kale oo lagu beddeli karo juice orange juice la qaboojiyey ama casiir liin macaan.
Tani dhoobo ah iyo sharoobada, liin macaan oo macaan , macaan oo caleemo cad oo cagaaran. Haddii aad u baahatid midabka cagaaran, kaliya ku dar dhibco cagaaran oo midab leh. Waxaad isticmaali kartaa xayawaanka laftirka ah ama saliid lagu qasi karo biyo yar ama cabitaan qamadi ah si loo qiyaaso dhadhanka.
Tani waa liin raspberry Faransiis ah lagu beddeli karo juice raspberry ama sharoobada ama xitaa macmacaan raspberry seedless, iyada oo ku xidhan ee cunto karinta.
Liifnig lakabka Talyaaniga taas oo lagu badali karo hektar ama almond.
Tani waxay u egtahay dabeecad dahab ah oo talyaani ah dhadhan aad u qaas ah, laakiin waxaa lagu bedeli karaa walxaha midkood ama dhalada.
Liifo kale oo lafdhabax leh oo Faransiis ah kaas oo si sahal ah loogu bedeli karo casiir ama orange juice qaboojiyey ama la yareeyey casiir cusub.
Tani waa calaamad aad u macaan oo Talyaani ah, sidaas darteed waxaad isticmaali kartaa labada casiir oo canab ah ama khamriga casriga ah ee aan khamriga laga jarin.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku yaala Shiicada Shirley (cabitaanada caruurta la cabbo) waxay ku yimaadaan noocyo khamriga iyo kuwa aan khamriga ahayn, sidaas daraadeed waa arrin fudud.
Cabitaanka, khamriga khamriga waxaa lagu dhufan karaa cabitaanka tufaaxa ama cabitaanka tufaaxa.
Liifka macaan ee macaan ee Mexican ah oo la sameeyey qaxwaha iyo digirta kookaha ayaa lagu bedeli karaa qaxwaha xooggan ama espresso oo ay weheliso taabashada budada kookaha.
Lika aan lafdhabarta lahayn ee johanneselka waxaa si sahlan loogu badalayaa mid ka mid ah casiirada madow: cherry madow, raspberry, boysenberry, currant, ama canab, ama mid ka mid ah dhadhanka u dhigma sharoobada, iyada oo ku xidhan inta uu leeg yahay inta aad rabto in aad udee aad.
Khamriga qallalan ee Faransiiska ah oo la beddeli karo noocyo aan khamri ahayn, casiir sabiib ah ama khamri khudradda cas, oo ku xiran hadba sida macaantu u baahan tahay.
Waxaa jira fursado badan oo suurtogal ah in lagu badalo khamriga cas (roodhida) (inta badan maraqa ama maraq). Khamriga aan khamriga ahayn, hilibka lo'da ama hilibka lo'da ama khudradda, khudradda qallalan ee laysku daro, khudradda cagaaran ee la qasiqiyey, khudradda cas ee casaanka ah ama khudradda bariiska, casiir yaanyo, iyo dareeraha boqoshaada qasacadaysan.
Waa mid ka mid ah khamriga ugu badan ee loo isticmaalo. Marka aad jebiso, rum waa caanaha oo ka soo jeeda qaamaha ama sharoobada sonkorta. Sidaa daraadeed rumow fudud, adeegso casiir macaan oo la kariyey oo laga soo koobay almond. Wixii mugdi madow ah, isticmaal jajabyada kulul la cabitaanka casiirka iyo dhadhanka la miraha miraha. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa dhadhanka loo yaqaan 'baking', laakiin waxa laga yaabaa inay leedahay waxoogaa khamri ah.
Cabitaankan Bariiska ah ee Aasiyaanka ah ee Asaliga ah waxaa loo rogi karaa khudaarta Bariiska ah, laakiin ka taxaddar inta ay joogaan. Sisirku si cad ayuu u noqon doonaa wax yar, sidaas darteed ha fileynin inuu isticmaalo qadar u dhigma.
Cajiib leh, khamri aan midab lahayn oo la beddeli karo oo laga soosaaray dibedda la kariyey ee sida lebbiska, miro, iyo wixii la mid ah.
Marka la yaqaan khamriga macaan, shariib ayaa loo rogi karaa casiir ama juuska macaan ee cuntooyinka badankood.
Inta badan hilibka doofaarku uma badna inay qabaan juuska cakta, laakiin nadarka agageed, taas oo ah beddel kale oo la aqbali karo oo loogu talagalay qulqulka (tan iyo markii laga sameeyay warshad isku mid ah) ayaa laga heli karaa dukaamada inta badan.
Liis kale oo liin macaan leh oo la beddeli karo oo la badali karo juice orange juice ama qabow casiir cusub.
Waxyaabaha muhiimka ah ee martini sax ah, bero waa cabitaan khamri ku salaysan oo lagu dhajiyay geedo, kuwaas oo laga yaabo inay macaan yihiin ama qalalan yihiin. Haddii cunto kariskaagu ku baaqayo saliideed macaan, isticmaal khamri aan khamri ahayn oo khamri ah, tufaax ama casiir sabiib ah ama qallal balsamic ah. Wixii saliideed qalalan, isticmaal khamri cabitaan aan khamri ahayn, casiir cad oo cad ama khalka cad oo cad.
Tani waxay noqon kartaa hal khamriga oo aan si sahal ah loogu beddeli karin beddel aan khamriga ahayn.
Haddii dhadiidku ku baaqdo qadar yar, waxaa laga yaabaa in laga wada tago.
Sida ilmo adeer ah, waxaa jira waxyaabo badan oo lagu bedelayo khamri cad. Isku day khamri aan khamri ahayn, maraq digaag ah ama balaastar ah, khudradda khudradda cagaaran ee khudradda cagaaran ama khudradda cider, khudradda cagaaran oo lagu qasi karo khudradda caddaanka ah ee khudradda cagaaran, faleebo, digir qasacadaysan, ama biyo. Wixii marinades, sirta 1/4 koob oo lagu daray 1 qaado oo sonkor ah iyo 1/4 koob oo biyo ah.
Cabitaanka & Kookaha
Sidee loo Nadiifiyaa Qabsashada
Qeybaha Kalluunka (Qeybaha Adeegyada Qaybta)
Ballotaro iyo Galantiin
Miyaan dhooban karaa khamriga qaboojiyaha?
Sidee loo sameeyaa soo saarida cusub ee Pandan
Waa maxay Choka ee Caribbean?
Shaaha Qasriga: Dhaqanka Koonfureed ee Sanadka
Sherbet Punch (Aalkolo la'aan)
Sida loo sameeyo Shukulaatada Cagaarka - Tababar Sawir leh
Casaan la kariyey oo la kariyey
Cabbiray Herring Salad Recipe
7 Tilmaamo ah Samaynta Hilibka iyo Khudaarta Cagaaran
Diyaarin London Broil
Waa maxay sababta muraayadaha loo yaqaan "Fillers"?
Tusaalooyinka 'Gr-Broil Patio Boot' -ka 'Grill Sphere Electric' # 10601578
Waxa aad iibsaneyso
Barafka Casiirka ah iyo Quinoa Salad Bowl
Salad baradho ah
Qoraalka Casiir Sulfam fudud
© 2022 so.hiloved.com